Wasiirka Maaliyadda XFS Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo faah-faahin ka bixiyay qorshaha deyn cafinta Soomaaliya – Banaadir Times
Wasiirka Maaliyadda XFS Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo faah-faahin ka bixiyay qorshaha deyn cafinta Soomaaliya
By banaadir 28th November 2020 101 No comment
Wasiirka Maaliyadda XFS Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo faah-faahin ka bixiyay qorshaha deyn cafinta Soomaaliya iyo dadaalada kala duwan ee socda ayaa sheegay in meel wanaagsan ay mareyso howsha lacag dhaafka ah.
Dowladda Faransiiska ayuu sheegay Wasiir Bayle in ay cafisay lacag dhan $306 milyan oo ay Soomaaliya ku lahayd waqti dheer, balse ugu dambeyn wada-xaajood lala galay uu sahlay in lacagtaas ay dhaafto Xukuumadda Paris.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in lacagta deynta ay daba-dheeraatay, rajo wanaagsan ayuu ka muujiyay in waqti dheer kadib ay cafiyaan dowladaha amaahda bixiyay.
“Lacagaha dhiman waxaa laga sugayaa qorshaha dhameystirka ee ka dhashay shirkii Paris Club 30-kii Maarso 2020, Ahmiyad weyn ayay inoo leedahay, sababtoo ah isbadalkii aan wadnay ayaa halkaan kusoo gaartay, waa mashruuc daba-dheeraaday balse Soomaaliya waqti kooban ayay ku qaadatay, xitaa Suudaan oo wadada ka dhacday ayaa nalagu yeeray oo nala dhahay uga warramaya sida loo maray deyn cafinta” ayuu yiri Wasiir Bayle.
Dowladda Faransiiska ayaa dhankeeda daabacday in ay noqotay Dalkii afaraad ee Soomaaliya ka ogolaada in uu ka dhaafo deynta ay ku leeyihiin si markale fursad loo siiyo qorshaha dib u habeynta maaliyadda iyo dhaqaalaha.
Laba bilood kahor, Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in uu dhaafay deyn uu Soomaaliya ku lahaa, waxaana Xukuumadda Washington howshaas u fuliyay danjiraheeda Soomaaliya Donald Yamamoto
Cumar Filish oo u hanjabay midowga musharaxiinta kadib warkoodii maanta
Musalsalka Maria&Mustafa Qeybtii.3aad